AVAST odeefannoo fayyadamtootaa gurgura jira – Akkam Jirtuu? Nooraa!
Dhaabatni antivaayirasii avast high sensitive browsing data fayadamtotni soqan kara dhabata jumpshot jedhamu gurguraa jiraachu isaa dhabatni PCMAG jedhamuuf MotherBoard jedhamu qoranoodhaan bira gahaniru. Kan isaan sassaabaa jiranis odefannoo Google Map, Vidiyoo Youtube, LinkedIn fi kan biroodha jechuudha. Itti gafataman dhabata Avast , odefannoo kannen akka email, maqaa kan hin kenine tahusaa dubataniru, fayyadaman mosaaji bilisaas kan kaffaltiis ,odeeffannoo sassaabu kana akka fayyadaamaan filatuti kessa galchineera jedhaniruu.
Windows 7 gaafa January 14 kaasee gargarsa Microsoft irra argatu addaan citeera
Windoon 7 gaafa waxabajii 22 bara 2009 gadhifamee wagga kudhaniis tajaajileera , itti ansuun window 8, 8.1 akkasumas bara 2015 window 10 gadhifameera , dhaabati maayikroo soft Kanaan booda apdet paachii windoo 7 akka hin laannee gabaaseera , Kanaan wal qabatees dhaabatni kun fayyadamtonni bilisaan gara windoo 10 tti akka ol gudifataniif moosaaji apdeetiif oluu marsaritii isaanira kaahaniru, kunis hangamiif akka turu hin beekamu waan taheef yeroodhaan fayyadamtotni dhimma itti baahaa.
Samsangiin bilbila Z flip kan dachahuu ji’a February dolara 1400 gabaaf dhiheessa
Yeroo ammaa kana waayeen bilbila dadachahuu qalbii namoota baayyee hawwateera , kananis walqabatee omishtonii warren akka Huwaei , Royole Flex Pai kanan dura hojetaniru , samsangin ammo gosa bilbila Z flip jedhamu qabatee as baheera.Gabaafis dolaara 1400$ ji’a guraandhala akka warra aditi ni gadhifama.Akka oduu tokko tokko gabafamutti bilbilli kun gatidhaan bilbilota dadachahan samsangiin hojetan kani gadi jedhama.
Dhabatni apple iphone 12 gadhisuuf jedha
iphone 11 gabaf kan dhihaate ture September 20, 2019 , yommu tahuu garaagarummaa ji’oota murtaahan booda iphone 12 gadhisuuf jedhu. Mac Oktara gulalaan jedhamu iphone 12 ,iphone 11 waliin wal fakkaata bakkeen isaas sibila garu , naannoo isaa iphone 4 durii waliin fakkaata jedhamee shakama jedheera. Jalatonnii iphone baayyee , waan haara eegna malee iphonee 11 waliin wal fakkaachuu hin qabuu jedhaniruu.
Dhukubni Korona vayiras jedhamuu nama 100 ol ajese
2020 oduu sodaachisa tahees qabatee as baheera innis dhukubni koronaa vaayiras jedhamu biyya chaayinaa keessattii umamuu isaati, Kanaan wal qabatees baayyinni namoota duhanii 100 caaleera. Yaaddoo guddaas taheera, biyyotni baayyeenis soda guddaa kessa jiru.
Kahumsi isaas naannoo Hubaayii jedhamudha, Kanaan walqabatee chaayinaan umata miliyoona 35 oltahuu bakka bakkati deemuu , bakkana daawwannaa dhaquuraas dhorkiteetti.
Taateen kunis wagga haaraa isaani yommuu kabajamurra tahuunsa aja’iba taasiseera.
Dhukubni kunis mallatolee
-Dhagna gubaa hamaa
-Qufaa hammaataaf gogaa tahee
-Tesisaa hamaa taheefi kaleen hojiin ala tahuun kan lubbuu balleesudha.
Dhaabatni warren akka Huwaei , Disney , DefCon fi kan biro baayyeen qophii isaanii yeroof addaan kutaniruu.
-Gates foundation 10$ gumaacheera.
Dhaabtni Nissan konkolata elektrikaa 2000 uber- ingilziif kennuuf
Dhaabtnii omisha konkolaataa beekamaa NISSAN japan konkolaachiftoota uber magaala ingiliz keessa jiraniif konkolaataa 2000 qarshii xiqqo dabalchisuun konkolaataa isaani gara konkolaataa elektrikaatti geddaruuf waligaltee uman , kanaanis walqabatee bu’aa guddaa qulqulina qilleensaa irratti akka fidu dubatameera.
Konkoolaataan kunis chaarjii altokkootiin 270km deemuu ni dandaahaa. Itti gaafataman uber awuroopa Kaaba Jeemi Heyiwuud , 2025 konkolatonnii ubeer magaalicha keessatti argaman elektrikaan bakka buhu jedhamee amana jedheera.